Izindaba - Yini okujabulisa
Bayanda abathengi bethu baqala ukusebenzisa i-cheertainer ukugcwalisa imikhiqizo ewuketshezi.
Ngemuva kwalokho, yini umuntu ozijabulayo?
Yisiqukathi esisha sokupakisha esihlanganisa ukuguquguquka kwesikhwama esiseBhokisini nezinzuzo ezithuthukisiwe zemikhiqizo yokupakisha eqinile noma eqinile, okwenza i-cheeratainer ibe enye indlela efanele kuzo zonke lezi zinketho. Iqukethe isikhwama sepulasitiki esimise okwe-cube, ikepisi noma i-valve nebhokisi lebhokisi.
Isakhiwo sayo esimise okhiyube siyinika ukuzinza okukhulu namandla okukhipha konke. Inezingqimba ezimbili: Isendlalelo sangaphandle: (i-polyamide + polyethylene) ivikela umoya-mpilo nomswakama; ukuminyana kwayo nokwakheka kwayo kuyahlukahluka kuye ngezidingo zeklayenti. Ukuhlanganiswa kwalezi zingqimba zombili kunika isitsha isakhiwo esiguquguqukayo kodwa esiqinisiwe.
Lapho igcwele, nebhokisi layo lamabhokisi, iyakwazi ukubambeka ngokuphelele, yakha iphalethi elizinzile neliphephile. Lapho ingenalutho, izingxenye zayo zingahanjiswa futhi zigcinwe zigoqiwe, ngaleyo ndlela kuncishiswe kakhulu isikhala esidingekayo. Lokhu kwehliswa kuholela ekongeni ezomnotho.
I-Cheertainer ingasetshenziselwa zonke izinhlobo zemikhiqizo engamanzi ne-semi-liquid ukusetshenziswa ezimbonini kanye nasekhaya. Imikhakha yayo esemqoka eyenzelwe yona yile:
• Amakhemikhali nama-Agrochemicals (izinto zokuthambisa, upende, izinto zokunamathisela, uyinki, ukulima, imfuyo, ukuphathwa kwamanzi, okokubasa oketshezi, imithi yokwelapha nezimonyo). • Ama-detergents
Abahloli basiza amakhasimende ukunciphisa izindleko.
l Ukuncishiswa kwama-60% ezindleko zokugcina
l 20% Ukunciphisa izindleko zamandla
l Ukunciphisa ama-50% ezindlekweni zokuhamba
l Ukunciphisa ama-90% ezindlekweni zokusebenzisa kabusha
Ibhokisi lebhokisi le-cheertainer linezinzuzo zalo:
Ibhokisi lebhokisi liyi-100% kabusha.
Indawo enkulu, eyenziwe ngokwezifiso ngokuphelele yokuxhumana ngemifanekiso.
Ukufakwa ngokugcwele kwe-stacking ne-palletising, okunciphisa izindleko zokuhamba.
Osayizi abahlukahlukene nokuklanywa okwenziwe ngokuphelele ukwanelisa izidingo zeklayenti ngalinye noma umkhiqizo.
Isikhathi Iposi: Sep-06-2020